Vaovao - Fanomanana ny karazana tsipika momba ny masirasira amin'ny masirasira
Mikorisa mikraoskaopy sy accesories
Slide fanaraha-maso kalitao
Slides an'ny kaonty sela
Mikorisa mikorisa mikraoba
Slides Adhesion amin'ny Cytology
Mikorisa mikraoskaopy polysine
Mikorisa mikraoskaopy tsara
Silane Mikraoskaopy mikraoba
Kardinaly Slide Mailer
Boaty fitehirizana sary na lovia fitehirizana
Slides Mikrokely Frosted Double
Mikorisa mikraoba mikraoba
Mikorisa mikraoskaopy tokana
Glass fitaratra mikraoskaopy
Soda sokay Coverglass
Coverglass fotsy faran'izay fotsy
Fampidinana kasety sy accesories
Lasitra fototra, rakotra vy tsy misy fangaronam-bolo ary savony vita amin'ny biopsy
Rings sy casette tsy misy sarony
2D Viale Cryogenika misy barcode
Vial Cryogenic Vial Thread
Vialan'ny krykogenika ao anaty kofehy
Tube sy accesories Centrifuge
Fantson'ny fantsom-bokatra Centrifuge sy boaty
Tube fantsona Microcentrifuge
Loza sy sela miely amin'ny inoculation
Swab fitaterana maina
Sintomy amin'ny Medium Transport
Torohevitra mandeha ho azy
Torohevitra Universal Fit Pipette
Tube fitaterana sy fantsom-panandramana
Fanomanana ny tsipika mikorisa amin'ny fitadiavana masirasira
Apetraho eo ambanin'ny lovia petri, apetraho eo amboniny ny tehina vera U, ary asio madio roa solosaina fitaratra amin'ny tsorakazo fitaratra.
Aorian'ny fandefasana sterilization dia ampio mililitera vitsivitsy misy vahaolana 20-huzo menaka voadio amin'ny taratasy sivana amin'ny fomba aseptika. Ny asany lehibe indrindra dia ny fitazonana ny taratasy sivana ho mando mandritra ny fizotry ny kolontsaina.
Ampiasao amin'ny pipeur Pasteur dia ampio agar-na masira dextrose vita amin'ny masirasira na ambonin'ilay vera fitaratra mba hamorona soson-kazo salantsalin'ny agar.
Mampiasà a inoculate loop arotsaho ny masirasira mba hosedraina amin'ny solomaso fitaratra, rakofana fitaratra tsy misy fangarony ny ampahan'ny kolotsaina, rakofana ny lovia petri ary apetraka amin'ny 25 ° C mandritra ny 7 andro mahery.
Mampiasà mikraoskaopy mifanohitra amin'ny fizarana mba hijerena ny fitomboan'ny bakteria amin'ny dingana fitomboana ary ampitahao ny fitomboan'ny bakteria mivoaka amin'ny rivotra sy eo ambanin'ny vera rakotra. Azonao atao ihany koa ny manala moramora ilayvera manarona avy amin'ny solomaso fitaratra, mandatsaka lactophenol, asidra lactophenol-picric na manga landihazo lactophenol mba hanamboarana ny bakteria, ary avy eo rakofana parafin, poloney na tombo-kase manokana ny takelaka fisaronana.
1. Sasao ny solosaina sy vera fanaronana.
2. Asio rano indray mitete eo afovoan'ny slide vera.
3. Mampiasà fanjaitra fanaparitahana hakana hyphae vitsivitsy.
4. Ahosory mba hamafana ny vongan-drano.
5. Sarony vera fanaronana.
6. Ny fanaovana fandokoana dia mila atao, ary azo jerena tsy misy fandokoana.
Mitovy amin'ny lovia petri,solosaina fitaratra, inoculate loop, vera manarona mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana sy fitaovana ara-pitsaboana, Huida dia tsy vitan'ny manome vahaolana ho an'ny mpanjifa fotsiny ho an'ny fitaovana laboratoara, fa koa manome vokatra feno sy kalitao feno ho an'ny laboratoara laboratoara. Tongasoa eto handefasanao fanadihadiana momba ny antsipiriany bebe kokoa.
Trano 12F atsimo, afovoany Julong, Feng Huang Hui, lalana 266 South Jiefang, Yancheng, Jiangsu, Sina
Telefaona: +86 515 83080735